Ukutshintshwa kokuthula kwamandla avela kumnye umongameli waseUnited States kunye nokulawula kwakhe kwelinye ngenye yezinto ezibonakalisa intando yeninzi yaseMerika.
Kwaye ininzi yoluntu kunye nabezindaba ngoJanuwari 20 ngamnye kwiminyaka emine igxininise ngokufanelekileyo kumongameli ongenayo ethatha i-Oath ye-Ofisi kunye nemingeni ezayo.
Kodwa umongameli ophumayo wenza ntoni ngosuku lwakhe lokugqibela eofisini?
Nanku ukukhangela ezintlanu izinto malunga nomongameli ngamnye nje ngaphambi kokushiya iNdlu yeNdlu.
Iingxaki zokuxolela okanye ezimbini
Abanye abaongameli bavelisa kwiNdlu ye-White House eqaqambileyo kunye neyokuqala ukuba imikhosi yokugqibela ihambe ngezakhiwo zembali kwaye ifuna ukuba abasebenzi bayifune. Abanye babonisa kwaye bafike emsebenzini ekukhupheleleni.
UMongameli uBill Clinton wasebenzisa usuku lwakhe lokugqibela eofisini, umzekelo, ukuxolela abantu abayi-141 kuquka noMarc Rich , umgidi-mabini otyholwa ngamacala okukhwabanisa iNkonzo yangaphakathi yeNkonzo, ukukhwabanisa i-imeyile, ukukhutshwa kweerhafu, ukunyaniseka, ukukhwabanisa noNondyebo we-US kunye nokuthengisa notshaba.
UMongameli uGeorge W. Bush naye wakhupha iimbali ezimbalwa kwiiyure zokugqibela zongameli wakhe. Basula izigwebo zentolongo yamagosa amabini asepolrol abetyala ngokudubula isigxina.
2. Yamkela uMongameli ozayo
Abaongameli bamva baye babamba abaphumelele ngokugqibela ngomhla wokugqibela eofisini. NgoJan 20, 2009, uMongameli Bush kunye noMongameli wokuqala uLaura Bush babamba uMongameli-Elect Bar Bar Obama kunye nomkakhe, kunye no-Vice-President-Electriver Joe Biden, ngekhofi kwiBlue Room ye-White House ngaphambi kokuvulwa kwelanga.
Umongameli kunye nomceli wakhe wahamba kunye eKapitol kwi-limousine yokuvulwa.
3. Shiya iNqaku kuMongameli omtsha
Kuba ngumcimbi kumongameli ophumayo ukushiya inqaku kumongameli ongenayo. Ngomhla kaJanuwari 2009, umzekelo, uMongameli uGrith W. W. Bush wayefuna uMongameli uBarack Obama ongenawo "kwisiqulatho esitsha esinobuchule" esele esele aqale ebomini bakhe, u-Bush uncedo watshela i-Associated Press ngelo xesha.
Inqaku lalingeniswa kwi-drawer ye-Office ye-Oval Office.
4. Uya kuKhululwa koMongameli ozayo
Umongameli ophumayo kunye nomongameli wongameli baya kwi-swearing and inauguration yomongameli omtsha baze bahanjiswe kwiCapitol ngabaxhamli babo. Ikomidi eliBumbene leNgqungquthela kwiMikhosi yokuSungula ichaza isebe likaMongameli ophumayo njengento echasene ne-climatic kwaye ingenasimo.
Incwadi ye-1889 ye-Official and Social Etiquette kunye neMisitho yomphakathi eWashington ichaze umcimbi ngale ndlela:
"Ukuhamba kwakhe kwiNkunzi-mali kuhambelana nomcimbi, ngaphandle kobukho bamalungu eKhabhinethi yakhe emva kweeKhabhinethi kunye namagosa ambalwa kunye nabahlobo bakhe." UMongameli ushiya iNqununu ngokukhawuleza emva kokuvulwa komceli wakhe. "
I-Helicopter Ride Out of Washington
Kuqhelekile ukususela ngowe-1977, xa uGerald Ford ephuma eofisini, ukuba umongameli aqhutywe kwiCapeitol ngezixhobo zeMarine One ukuya kwi-Andrews Air Force Base ukuze abuyele kwidolophu yakubo. Esinye seziganeko ezingenakukhunjulwa malunga nohambo olunjalo luvela kwintambo kaRonald Reagan eyajikeleza eWashington ngoJan. 20, 1989, emva kokushiya isikhundla.
UKen Duberstein, umphathi kaReagan, watshela umnyatheli wephephandaba emva kweminyaka:
"Njengoko sasihamba ngesibini phezu kweNdlu eNtshonalanga, uRagag wabheka phantsi ngefasitela, wambamba uNancy emadolweni, wathi, '' Khangela, mzalwana, kukho ibhonalow yethu encinci. '' Wonke umntu waqhawula ngezinyembezi, ekhala. '
Ngaphambi kokuba Ubhalise kwi-MCAT
Iindaba ezilungileyo zeKrismesi
Iiplani zezobupolitika ze-SNL eziphambili
Ukuchonga iziGqeba ezizimeleyo kunye nezixhasayo
5 I-American SUVs kunye neCrossovers ezilungileyo